Umbiko wezokuvakasha eBRAZIL - Phakathi kwamadolobha amakhulu nezimangaliso zemvelo ezihlaba umxhwele - iSven Luca World
Umbiko wokuhamba eBRAZIL - Phakathi kwamadolobha amakhulu kanye nezimangaliso zemvelo
Izidingo zeVisa nokungena eBrazil:
Ayikho i-visa edingekayo
Imininingwane evela ku-Federal Foreign Office ohambweni lwakho oluya eBrazil:
IBrazil yizwe lesihlanu ngobukhulu emhlabeni ngokwendawo nangabantu. Izwe elikhulu kunawo wonke futhi, elinabantu abangaba yizigidi ezingama-210, futhi liyizwe elinabantu abaningi eNingizimu Melika. IBrazil inomngcele ofanayo nawo wonke amazwe aseNingizimu Melika ngaphandle kweChile ne-Ecuador, ngakho-ke inamazwe ayishumi angomakhelwane.
Umfula obaluleke kunayo yonke ezweni yi-Amazon, okuwumfula ocebe kakhulu nowesibili ngobude emhlabeni, onamakhilomitha aphelele angama-6.448. Iningizimu yeBrazil iyindawo yokubamba imifula i-Uruguay neParana. Umthendeleko weParana waziwa ngeziMpophoma ezidumile ze-Iguazu.
Isimo sezulu saseBrazil ikakhulu sishisa kakhulu, sinokushintshashintsha okuncane kwesizini emazingeni okushisa, eningizimu yetropical kuphela lapho kunesimo sezulu esilinganiselayo.
Kunamapaki kazwelonke angama-62 noma izindawo ezivikelwe eBrazil, kufaka phakathi umcengezi wase-Amazon, ihlathi lemvula elikhulu kunawo wonke futhi elinemvelo ehlukahlukene kakhulu emhlabeni. Imifula iRio Negro ne-Amazonas ihlangana ngaseManaus.
IBrazil ukuphela kwezwe eMelika lapho kukhulunywa khona isiPutukezi. IsiPutukezi saseBrazil sinohlamvu lwaso futhi sihlukile kokwehlukile kwaseYurophu. Abantu baseBrazil ababalelwa ezigidini eziyi-1,5 bakhuluma isiJalimane njengolimi lwabo lwebele, okwenza isiJalimane kube ulimi lwesibili oluvame kakhulu ezweni. Cishe abantu abangama-65% bathi bangabesonto lamaRoma Katolika.
Imali yezwe esemthethweni ingeyangempela yaseBrazil, ene-1 euro ehambelana cishe ne-4,50 BRL. Izinga lobugebengu lingaphezulu kakhulu kwesilinganiso somhlaba jikelele kanti nezinga lokubulala liphakathi kwamazinga aphezulu emhlabeni.
Izindawo ezinamadolobha amakhulu kakhulu ezweni laseSao Paulo, eRio de Janeiro, eBelo Horizonte, inhlokodolobha iBrasilia, iPorto Alegre, iSalvador de Bahia, iFortaleza, iRecife neCuritiba.
ISao Paulo idolobha elikhulu kunawo wonke eBrazil ngisho nakuyo yonke iNingizimu Melika. Ngasikhathi sinye, liphinde libe idolobha elikhulu kunawo wonke eningizimu nenkabazwe nenjini yezomnotho yaseBrazil. Njengoba inabantu abangaphezu kwezigidi eziyishumi nambili, leli dolobha liyisikhungo esibaluleke kunazo zonke kwezomnotho, kwezezimali nangamasiko ezweni. Cishe abantu abayizigidi ezingama-22 bahlala endaweni yedolobha elikhulu laseSao Paulo.
Inhlokodolobha iBrasilia yakhiwa eminyakeni emithathu nje ngawo-1960. Namuhla leli dolobha linabahlali abacishe babe ngama-200.000, isifunda sedolobha elikhulu sinabantu abacishe babe yizigidi ezingama-4,4.
I-Rio de Janeiro yayiyinhloko-dolobha yaseBrazil cishe iminyaka engama-200 futhi idolobha elidume kakhulu ezweni elinabantu abangaba yizigidi ezingama-6,5. Cishe abantu abayizigidi eziyi-12 bahlala esifundeni esikhulu sedolobha lesibili ngobukhulu eBrazil, okwenza iRio ibe ngomunye wamadolobha amakhulu emhlabeni.
Izimpawu zaseRio de Janeiro yiShukela Isinkwa, isithombe sikaKristu esingamamitha angama-38 ukuphakama esiqongweni saseCorcovados nasolwandle esifundeni saseCopacabana, okungenye yamabhishi adume kakhulu emhlabeni. Idolobha laziwa nasemhlabeni jikelele ngeCarnival yaminyaka yonke yaseRio.
Izifunda ezibaluleke kakhulu eRio de Janeiro zifaka iBarra, iCopacabana, i-Ipanema, iBotafogo, iSao Cristovao, iSanta Teresa, iCampo Grande, iCentro neLapa, enezitebhisi ezidumile emhlabeni kanye nemengamo yeLapa.
Kuze kube manje, ngike ngavakashela iBrazil kabili phakathi nohambo lwami lweminyaka engu-7 emhlabeni jikelele. Isikhathi sokuqala lapho ngangikhona ezweni amasonto amahlanu ngesikhathi seNdebe yoMhlaba yebhola ehlobo ngo-2014. Ngaleso sikhathi ngangilandela yonke imidlalo eyisikhombisa yeqembu lesizwe lebhola likanobhutshuzwayo laseJalimane, kufaka phakathi owamanqamu, ngihlala enkundleni yezemidlalo. Vele, ngazazi kahle zonke izindawo ngoba ngangichitha okungenani izinsuku ezinhlanu edolobheni ngalinye. Iqembu laseGerman lidlale eSalvador de Bahia, eFortaleza, eRecife, ePorto Alegre, eBelo Horizonte nakabili eRio de Janeiro, eMaracana Stadium edume umhlaba wonke.
Kimi, amadolobha amahle kakhulu afaka phakathi iSalvador de Bahia nedolobha elihle elidala, iFortaleza enendawo enhle yokuhamba olwandle, iPorto Alegre enamandla amakhulu aseYurophu kanti futhi yiRio de Janeiro enezindawo zayo eziningi ezihlukile.
Amaphuzu avelele amasiko alolu hambo ngokungangabazeki ahlanganisa ukuvakashela i-Rio's Sugar Loaf Mountain, umbono ongachazeki phezulu kusukela kuChristian figure Corcovado kanye nokuhlala ngokukhululeka ezitebhisini zeLapa.
Umzuzu engingasoze ngawukhohlwa kimi kwaba owandulela owamanqamu eBelo Horizonte, ngokunqoba okumangalisayo kweqembu laseJalimane ngo-7-1 kubaphathi beBrazil, omunye wemidlalo yebhola ebabazekayo emlandweni. Kodwa-ke, lo mdlalo weqiwa kowamanqamu ngoJulayi 13, 2014 eMaracana Stadium edumile eRio de Janeiro, lapho iJalimane yanqoba khona umqhudelwano webhola lezinyawo lomhlaba ne-Argentina okwesine. Lolu suku nalo mdlalo bekungokunye kokuhlangenwe nakho okuthakazelisa kakhulu empilweni yami yonke kuze kube manje.
Ngalesi sikhathi seNdebe yoMhlaba kanobhutshuzwayo, bengihlala ngasese ePorto Alegre naseBelo Horizonte ubusuku bonke obuyishumi ngeplatifomu ye-inthanethi "Couchsurfing". Kwakumangalisa ukuthi abanye abantu baseBrazil benza ingxenye yefulethi labo itholakalela abalandeli bebhola bamazwe omhlaba mahhala. Ngalezi zinsuku ngase ngihlangane nabantu abaningi abafudumele nabamnandi njengabangihambele uJuliano noRosane, ababa ngabangani bami kamuva. Kusukela ezihambweni eziningi zedolobha kuya emaphathini okuzenzakalela noma okosa inyama okwehlukahlukene, bobabili banginakekele ngaso sonke isikhathi ngesikhathi ngihlala.
Okwesibili ngaya eBrazil ngoJanuwari 2018. Ngavakashela amadolobha aseCampo Grande, eBrasilia, eCuritiba kanye naseRecife, eIguazu Falls nasesiqhingini samaholide saseBrazil iFernando de Noronha.
Izimpophoma ezidume umhlaba wonke zase-Iguazu yizimpophoma ezihlaba umxhwele kakhulu emhlabeni kimi, njengoba ngike ngavakashela phambilini iNiagara kanye ne-African Victoria Falls.
Isiqhingi saseFernando de Noronha, cishe amahora amabili ngendiza sisuka eRecife, singesinye seziqhingi ezinhle kakhulu emhlabeni wami.
Sekukonke, iBrazil iyindawo enhle yokuvakasha enezimangaliso zemvelo ezihehayo kanye nokuheha okuningi kwamasiko. Njengomvakashi, noma kunjalo, kufanele uxwayiswe ngobugebengu obedlulele ngeshwa futhi uhambe uzungeze izwe ngokufanele. Emadolobheni amakhulu ikakhulukazi, wonke umuntu kufanele akulungiselele kahle lokhu futhi, ngokuphepha kwakhe, kufanele agweme konke okuyigugu.
Umbiko wokuhamba we-BOLIVIA - Siyakwamukela ezweni lase-Andes lezimangaliso zemvelo ezihlaba umxhwele
Umbiko wokuhamba CHILE - Izwe elide kunawo wonke emhlabeni elinogu olude olungapheli lwasePacific
Umbiko wezokuvakasha iVENEZUELA - Indawo enezinkathazo phakathi kwe "Salto Angel" kanye nobuhle beCaribbean
Umbiko wezokuvakasha URUGUAY - Ithiphu yangempela ngaphakathi eNingizimu Melika phakathi kobuciko, iwayini nezinyama zenyama yenkomo
Umbiko wezokuvakasha ISURINAME - Ukuthinta okukhulu kweHolland ezweni elincane kunazo zonke eNingizimu Melika
Shiya impendulo Antworten abbrechen